China 35khz 800w Plastiki Ultrasonic Spot Welding Machine fekitori uye vagadziri | Powersonic
Dana Us: +86 15658151051
Ultrasonic Kucheka Mudziyo
Ultrasonic Machining Chishandiso
Ultrasonic Simba Rinopa
Ultrasonic Welding Shanduri
Ultrasonic Welding Nyanga
Ultrasonic Welding Chishandiso
Ultrasonic Welding Kutapisa
Ultrasonic kutsigisa igwa Water Di ...
Yakakwira Simba Ultrasonic Homog ...
Ultrasonic wekutendeuka Equiment ...
35khz 800w Plastiki Ultrason ...
35khz 800w Plastiki Ultrasonic Spot Welding Machine
epurasitiki ultrasonic gwapa Welding muchina
35khz Ultrasonic gwapa Welding muchina
800w ultrasonic gwapa nomoto muchina
Yakakwenenzverwa ruoko yakakwenenzverwa ultrasonic yekutengesa muchina weMota yemukati mapaneru nzvimbo yekutenderera
Ultrasonic epurasitiki Welding muchinaWelding michina yakagadzirwa mumunda wepurasitiki yekumonera, iyo indasitiri inonzi inonzi ultrasonic epurasitiki yekutengesa muchina kwenguva pfupi. Ultrasonic Welding michina ndeye yepamusoro-tekinoroji tekinoroji yekutengesa yakabikwa epurasitiki zvigadzirwa. Mhando dzese dzezvigadzirwa zvepurasitiki zvakabikwa zvinogona kurapwa neyakagadzirwa nemagetsi. Paunenge uchirovera zvigadzirwa zvepurasitiki, usawedzere chero zvinonamatira, mafiringi kana zvinonyungudutsa, kana kudya yakawanda yekupisa .Iine zvakanakira kushanda nyore, kumhanyisa kumhanyisa kumhanyisa kumhanyisa, kwakasimba kwesimbi simba uye yakakwirira yekugadzira kugona. Naizvozvo, iyo Ultrasonic yekutengesa tekinoroji iri kuwedzera uye zvakanyanya kushandiswa zvakanyanya.
Chinhu Parameter Kubatsira: Kushanda
28Khz inogadzira ruoko welder
▪ Jenereta yedhijitari
▪ Nyanga yakagadziriswa
▪ Aluminium chiwanikwa & Simbi & Titanium chiwanikwa
▪ Magetsi: 220v 50 / 60HZ
1. jenareta mwenje, mwenje ruoko welder. Iyo jenareta 120 * 120 * 380, izere weight5KG, ine jenareta 4kg, uye 28Khz ruoko welder 1kg, 35Khz ruoko welder 0.8kg. Dzakakodzera ruoko ishande.
2. Dzakasarudzika chiwanikwa simbi dzimba, dzimba dzemaoko-welder iri yakapusa asi yakasimba, kwete nyore kuremara, yakareba yaizoshandisa hupenyu.
3.Dhijitari jenareta, inogona kuteedzera iyo frequency iyo pachayo, nyore kushandisa. Kubuditsa / nguva yekutengesa inogadziriswa, sutu kune ese maviri mashandiro nemaoko uye mashini anoshanda.
PP PVC Mucheka rakarukwa Pe ABS
PS Nylon PU PET Yese Thermoplastic zvinhu, iyo ukobvu 8mm mune max.
Yakatwasuka mhando sutu kune ese ruoko / muchina unoshanda.
Pfuti mhando sutu yeruoko inoshanda.
35Khz inogadzira ruoko welder
PS Nylon PU PET Yese Thermoplastic zvinhu, iyo ukobvu 5mm mune max.
Zvekushandisa zvirinani, zvirinani kugovana ruzivo rwese rwezvinhu neni, izvo zvinhu, ukobvu, shandisa nzira, kumhanyisa zvinodiwa pamberi pekuraira.
Isu tinopawo 20Khz 40Khz ultrasonic ruoko-weld welder.
Kana iyo ultrasonic wave ichiiswa kune iyo thermoplastic epurasitiki yekubata pamusoro, ichagadzira makumi ezviuru eepamusoro-frequency vibrations pasekondi. Mhando iyi yeiyo yepamusoro-frequency vibration inosvika kune imwe amplitude. Iyo ultrasonic simba inopfuudzwa kune iyo yekutenderera nzvimbo kuburikidza neiyo yepamusoro yekumonera chidimbu. Iyo welding interface ine yakakura acoustic kuramba, saka yemuno tembiricha yakakwira inogona kuitika. Zvakare, nekuda kwekushomeka kwemafuta ekudzivirira epurasitiki, ivo havana kukwanisa kuburitswa munguva uye vakaungana munzvimbo yekutungidza, izvo zvakakonzera maficha ekubatana epurasitiki maviri kuti anyungudike nekukurumidza, uye mushure mekunge kumwe kumanikidzwa kwaiswa, vakasanganiswa Poshi. Iyo ultrasound painomira kushanda, rega kumanikidza kupfuure kwemasekondi mashoma kuti iite yakasimba uye fomu, kuitira kuti yakasimba mamorekuru ngetani iumbwe kuzadzisa chinangwa chekusvira, uye simba rekusimbisa rinogona kuve padhuze nesimba rezvinhu zvakasvibirira. . Iko kunaka kweiyo ultrasonic epurasitiki yekumonera kunoenderana nezvinhu zvitatu zveiyo transducer yekutengesa nyanga amplitude, iyo yakamanikidzwa kumanikidza uye iyo yekumonera nguva. Iyo yekumhanyisa nguva uye yekutenderera nyanga kumanikidzwa kunogona kugadziridzwa. Iko kukura kwakatemwa neanoshandura uye runyanga. Pane kukosha kwakakodzera kwekudyidzana kweizvi zvitatu zvinhu. Kana simba racho rakapfuura kukosha kwakakodzera, hunyoro hwepurasitiki hwakakura, uye chinhu chakasungirirwa chakaremara nyore; kana simba racho riri diki, iyo simbi iri nyore, uye kumanikidzwa kunoiswa hakugone kuve kwakanyanya. Uku kumanikidza kwakakwana ndicho chigadzirwa chehurefu hwemucheto wechikamu chakasungirirwa uye kumanikidza kwakaringana pa1mm yemupendero.
Iyi switchable ultrasonic banga yekutengesa michina inogona kusununguka kusununguka pakati penzira mbiri dzekubata
Pistol mhando ultrasonic gwapa nomoto muchina: Chimiro chakagadzirwa maererano ne ergonomics. Iyo ultrasonic yekutanga switch inowanikwa panzvimbo yekukonzeresa kwepistori, iri nyore pakusimudza nekushandisa. Inonyanya kukodzera mashandiro ekutenderera kana akamira emoto.Yakarurama-bata ultrasonic nzvimbo welder: Icho chimiro chakatwasuka-chubhu dhizaini. Iyo ultrasonic yekutanga switch inowanikwa kunze kweiyo yakatwasuka-chubhu, iyo iri nyore kune inobatwa-ruoko inobatwa kutakura uye kutakura.
Pashure: Plastiki Rubha Ultrasonic Ruoko Kucheka Simbi Nereza 5mm Kucheka Ukobvu
Lithium Bhatiri Spot Welder
Plastiki Spot Welder
Spot Welding Machine Mutengo MuChina
Nzvimbo Welding Plastiki
Aluminum chiwanikwa Nyanga Ultrasonic Spot Welder 35kh ...
Handheld Mucheka Ultrasonic Kubatanidza & Cutt ...
Chiwanikwa Nyanga 35khz 500w Handheld Ultrasonic Welder
35khz Inotakurika Ultrasonic Welding Midziyo Ult ...
Chinyorwa Ultrasonic Welding Machine yeinzwi ins ...
Non unoparadza inotakurika ultrasonic gwapa weredha ...